ဖူးနုသစ်: Economist ရဲ့ အယ်လ်ဘမ် (၁)
နိုင်ငံခြားကနေ ရန်ကုန်ကို ခဏ ပြန်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ တွေ့ရင်း သဘောကျလို့ မ လာပါတယ်။ ရန်ကုန်ကို အလွမ်းပြေ ကြည့်လို့ ရအောင်က တစ်ကြောင်းပါ။ နောက်တစ်ခု ကတော့ တစ်ချို့ ဓာတ်ပုံတွေမှာ ဓာတ်ပုံနဲ့ အတူ ရေးထားတဲ့ သူ့ရဲ့ အတွေးတွေကို သဘောကျလို့ပါ။ သူကတော့ အမေရိကန် တက္ကသိုလ် တစ်ခုကနေ ဘောဂဗေဒနဲ့ မာစတာ ပြီးထားတဲ့သူမို့ အရာရာကို စီးပွားရေး ပညာရှင် အမြင်နဲ့ တွေးတယ် ထင်ပါတယ်။ သူ့ကို ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ စာသားတွေ ဘလော့ခ်ပေါ်တင်မယ် ပြောတော့ တင်ချင်တင်ပါ သူ့နာမည်တော့ မထည့်ပါနဲ့ ပြောလို့ နာမည်တော့ ဖျောက်ထားလိုက် ပါတယ်။
The external splendor of the two buildings, sitting on Sule Pagoda Raod, belies their near-zero occupancy rates. The construction kicked off approximately 20 years ago and has been delayed many years only to give way to the buildings sitting idle when the construction was completed. Is itasign of the economy overheating even before it takes off? Or, is it simply losing it steam even before take-off with full load of passengers and cargo?
ခမ်းနားထည်ဝါနေတဲ့ အဆောက်အဦးနှစ်ခု။ ဆူးလေဘုရားလမ်း ပေါ်မှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအဆောက်အဦးတွေကို နေထိုင်အသုံးပြုတဲ့ သူက သုညနီးပါးပဲ။ သူတို့ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂၀ လောက်က စဆောက်ခဲ့ပြီး ဆောက်နေဆဲ ကာလမှာ နှစ်တွေ အများကြီး နှောင့်နှေးခဲ့ရတယ်။ နောက်ဆုံး ဆောက်လို့ ပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဘာမှမသုံးပဲ ဒီအတိုင်းပဲ ပစ်ထားကြတာပေါ့။ ဒါဟာ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံတစ်ခု မစတင်ခင်မှာပဲ အပူချိန်လွန် သွားတဲ့ သဘောလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ခရီးသည်တွေ ကုန်ပစ္စည်းတွေ အပြည့်တင်ထားတဲ့ သင်္ဘောတစ်စင်း စပြီး မမောင်းရသေးခင်မှာပဲ ရေနွေးငွေ့ကုန်သွားတာလား။
Seems likeaGothic structure in Brussels, Belgium? Nope. It is an Anglican Church standing imposing on BoGyok Aung San Street.
ဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှာ ရှိတဲ့ ဂေါသစ် ပုံစံ အဆောက်အဦးတွေ ထင်လို့လား။ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ အင်ဂလိကန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တစ်ခုရဲ့ ပုံပါ။
Believe it or not. The market price for this car is US$ 12000 (calculated at prevailing market exchange rate). The car barely runs requiring regular inspection and maintenance. Is itasign of asset bubble or pent-up demand for automobiles?
ယုံမလားတော့ မသိဘူး။ ဒီကားရဲ့ တန်ဖိုးဟာ အခုလက်ရှိ ဒေါ်လာပေါက်ဈေးနဲ့ တွက်ရင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀ ရှိပါတယ်။ ဒီကားတွေဟာ အမြဲတမ်း စစ်ဆေးပြင်ဆင်နေရပြီး မောင်းလို့ ရတယ် ဆိုရုံပါပဲ။ ဒါဟာ ကုန်ပစ္စည်းတွေ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် မူရင်းဈေးကနေ မတရား ကြီးမြင့်သွားတာရဲ့ သင်္ကေတလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် မော်တော်ကားအတွက် ဝယ်လိုအား မတန်တဆ များနေတာလား။
An incubator of medical practitioners for more than halfacentury, Rangoon Medical School is an elite school having attracted top students since its inception
ဆရာဝန်တွေကို ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကျော် မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်က ဆေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ ပုံပါ။ ဒီတက္ကသိုလ်ဟာ ထိပ်တန်းကျောင်း တစ်ကျောင်း ဖြစ်ပြီးတော့ စကတည်းက ထိပ်ဆုံးကျောင်းသားတွေကို ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
A mosque standing beautifully in downtown Rangoon, which suggests our society is endowed with religious diversity.
ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်မှာ လှလှပပ ရပ်တည်နေတဲ့ ဗလီတစ်ခုပါ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရား ပေါင်းစုံနဲ့ ရပ်တည်နေတယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါပဲ။
Burmese way of capitalism: residents are responsible for paving their local road, which is not excusable, meaning anyone living in other community and who didn’t make financial contribution to this project can use this road free of charge. By the same token, residents of this community can use paved road in other communities free of charge. Will the provision of public good by local residents lead to an efficient allocation of resource? Or, do the residents have the right to collect toll from commuters and motorists for using their road?
ဒါဟာ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်နဲ့ အရင်းရှင်စနစ်ပါ။ ဒီရပ်ကွက်မှာ နေတဲ့သူတွေဟာ သူတို့လမ်းကို သူတို့ဘာသာ ခင်းရတယ်။ ဒါဟာ ရှောင်လွဲလို့ ရတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ တခြားရပ်ကွက်မှာ နေပြီး ဒီလမ်းခင်းတဲ့နေရာမှာ ပိုက်ဆံထည့်မထား တဲ့သူတွေက ဒီလမ်းကို ပိုက်ဆံ တပြားမှ မပေးဘဲ သုံးခွင့် ရှိကြတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးပဲ ဒီရပ်ကွက်မှာ နေတဲ့သူတွေကလည်း တခြားရပ်ကွက်မှာ သူများတွေ ခင်းထားတဲ့ လမ်းတွေကို ပိုက်ဆံပေးစရာ မလိုပဲ သုံးခွင့် ရှိတယ်။ အများပြည်သူသုံးမယ့် ပစ္စည်းကို ဒေသခံပြည်သူတွေက ဝိုင်းဝန်ပံ့ပိုး ပေးရတာဟာ အရင်းအမြစ်တွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ နေရာမှာ ထိရောက်မှု ရှိပါ့မလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဒီရပ်ကွက်မှာ နေတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေ ဒီလမ်းကို သုံးတဲ့ ကားတွေကို လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ဖို့ သင့်မလား။
Rangoon General Hospital, the biggest public hospital in Rangoon.
ရန်ကုန်မှာ အကြီးဆုံး အများပြည်သူသုံး ဆေးရုံဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးပါ။
ဓာတ်ပုံတွေရော စာသားတွေပါ အသုံးပြုခွင့် ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း ကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by ZT at 2:29 PM
ေကာငး္ပါတယ္ ဖဘထဲမွာ ေကာင္းတဲ႕ပုိစ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဘေလာ႕နဲ႕မတူတာက သူတို႕ဟာ limited ၿဖစ္ေနတယ္။ သူတိုိ႕႕ကုိ သူတို႕နဲ႕ပက္သက္တဲ႕သူေတြ ဘဲ ဖတ္ခြင္႕ရွိတယ္ ခက္တာ က သူတို႕ရဲ႕သူငယ္ခ်ငး္မ်ားက စာဖတ္ဝါသနာ ပါသူ ရွိမယ္ မပါသူရွိမယ။္ မ်ားေသာအေားၿဖင္႕စာဖတ္ဝါသနာ ပါသူ နည္းမယ္။ စကားေတြေၿပာမယ္။ status ေတြ တင္မယ္။ ပံုကေလးေတြ ႀကည္႕ႀကမယ္ ဖလွယ္ႀကမယ္။ အဲသည္ေတာ႕ စာဖတ္ဝါသနာပါသူမမ်ားတဲ႕ သူငယ္ခ်ငး္မ်ားနဲ႕လူဟာ သူ႕ရဲ႔ပုိစ္ေလးေတြ က နေမ်ာဘို႕ေုကာင္းတယ္။
ဘေလာဲရဲ႕အားသာခ်က္က စကတည္းက စာဖတ္ခ်င္တဲ႕သူေတြက ဘေလာ႕ဂါေတြ စာဖတ္ဝါသနာပါသူေတြ ဘေလာ႕ရီဒါေတြ ဘာေလးမ်ား ဖတ္ရမလဲ ဘာေလးမ်ား ေကာငး္တာေလးမ်ားတက္မလဲလုိ႕ အၿမဲေမ်ာ္လင္႕ေနတဲ႕သူေတြ. ဆုိေတာ႕ ဘေလာ႕က ပိုၿပီး ရွင္သန္စီးဆင္းေနတယ္လုိ႕ခံယူမိတယ္။ ဖဘ မွာဝါသနာပါသူေတြ က ဘေလာ႕ေထာင္ၿပီးေရးသင္႕တယ္လုိ႕ခံစားမိတယ။္ မဟုတ္ရင ္သူတို႕ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြ ကို အၿပင္ပကလူေတြ က ခံစားခြင္႕မရႀကဘူးၿဖစ္တယ္။ status မ်ားနဲ႕အတူ စီးေမ်ာသြားတယ။္ ဒါေပမဲ႕ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ကိုယ္ေရးရရင္ၿပီးေရာ နဲနဲပါးပါးက ဖတ္ေပးႀကရင္ၿပီးေရာ. အမ်ားသူငါကုိ မခ်ၿပခ်င္တဲ႕သူတစ္ခ်ိဳ႕လဲ ရွိတယ။္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ႕. ဒါေပမဲ႕ အခုလုိ ဖတ္ခြင္႕ရတာ ေက်းဇဴးတင္ပါတယ။
စကားမစပ္ ပံုကေလးေတြ အေတာ္ႀကည္တယ္ေနာ္ ဘာကင္မရာတဲ႕လဲ။
ေမးၾကည့္ဦးမယ္။ ဘာကင္မရာလဲလို႕။ ကြ်န္ေတာ့္ ကင္မရာလို2Megapixel မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာေလာက္တယ္။
အင္း ရန္ကုန္ကိုေတြ႕ရတာ လြမ္းတယ္.
ကိုZT ပို႕(စ္)က ၿမန္မာစာလံုးေတြ အတည့္ၿမင္ရၿပီ အစက ဘာမွန္းမသိဘူး ဖတ္ရတာ..
ရံုးကစက္နဲ႕ပဲဖတ္လို႕ရတယ္ အိမ္က စက္နဲ႕ဆို ဘာfont မွန္းမသိတာ။ခုေတာ႕ရၿပီ
ဘယ္ေဖာင့္သုံးထားတာလဲဗ် ဘာမွဖက္မရဘူး ျဖစ္ေနလို႕
You can use any font that compatible with Unicode 5.2 standard to view my blog. The list of Myanmar fonts that supported Unicode standard can be view here.
For installation, please takealook at the following link for download link and installation guide.